dmMediaConverter FFmpeg | ပေါ်တွင်အခြေခံသည့်မာလ်တီမီဒီယာဖိုင်ပြောင်းစက်တစ်ခု Linux မှ
DmMediaConverter multiplatform application တစ်ခုဖြစ်သည် Linux, MacOS နှင့် Windows အတွက်အထောက်အပံ့နှင့်အတူ, အသံနှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်များကိုပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့် FFMpeg ကိုအခြေခံသည် အရာသည်လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားများဖြစ်သည့် h264, h265, vp8, vp9 audio - aac, mp3, flac, pcm, vorbis စသည်တို့ကိုထောက်ခံသည်။
လြှောကျလှာ တစ်ချိန်တည်းမှာဖိုင်များစွာကိုင်တွယ်ခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးအပြောင်းအလဲများကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်စေသည် တစ် ဦး ချင်းစီသူတို့အဘို့။
Entre dmMediaConverter ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ SRT၊ ass, ssa, mov_text နှင့် dvdsub စသည်ဖြင့်စာတန်းထိုးများပါ ၀ င်သည်။ ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ခွဲခြင်းစသည်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အခြား application များနှင့်မတူဘဲ dmMediaConverter, တူညီတဲ့ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူနှစ်ခုဖိုင်များကိုပူးပေါင်းတစ် ဦး တာဝန်ဖျော်ဖြေသောအခါ, သူတို့ကို recode လိမ့်မည်မဟုတ်ပါဤရွေးချယ်မှုသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ ၎င်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်ကိုသက်သာစေသည်။
အယ်ဒီတာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောနောက်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည် ဖိုင် metadata ကိုပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်စွမ်း, re-encode ရန်မလိုဘဲ။
1 dmMediaConverter ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ:
2 dmMediaConverter ကို Linux တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
3 Linux မှ dmMediaConverter ကိုမည်သို့ဖယ်ထုတ်ရမည်နည်း။
ဖိုင်တစ်မျိုးတည်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောဖိုင်အမျိုးအစား (ကွဲပြားခြားနားသောကုဒ်နံပါတ်များ၊ resolution စသည်ဖြင့်) ကိုချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း။ အရင်းအမြစ်ဖိုင်အားလုံး၏အကျဆုံးအကျဆုံးဖြင့် output ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဖိုင်တစ်ခုအားဝေရန်သို့မဟုတ်ချုံ့ရန် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်မှတ်များ (ပြန်လည်ကုဒ်မပါဘဲ) အရ
စီးဆင်းမှုပရိုဖိုင်းများသို့မဟုတ် manual settings များကို အသုံးပြု၍ ဖိုင်များကိုအမြောက်အများဖြင့်ပြောင်းပါ
Streaming Profiles များ - အသံနှင့်ဗွီဒီယိုပရိုဖိုင်းများကိုဖန်တီးပြီးအသုံးချပါ
စင်ပြိုင်အလုပ်များ - လုပ်နိုင်သည် တစ်ချိန်တည်းမှာမျိုးစုံအလုပ်အကိုင်များကို run
ပုံရိပ်ချိန်ညှိချက်များ - ပြောင်းလဲမှုများကိုချက်ချင်းဖော်ပြသည်
စကေး: ဗီဒီယို resolution ကိုပြောင်းလဲပစ်
Auto crop: encoder အတွက်အကောင်းဆုံးသီးနှံတန်ဖိုးများကိုရှာဖွေပေးတယ်
dmMediaConverter ကို Linux တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
dmMediaConverter ကိုတပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ system တွင် deb သို့မဟုတ် rpm packages များရှိသည်။
အတွက် dmMediaConverter ကို Debian, Ubuntu နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျကို install လုပ်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဗိသုကာနှင့်သင့်လျော်သော deb package ကို download လုပ်ရမည် အောက်ပါလင့်ခ်.
သင်၏ system တွင်မည်သည့်ဗိသုကာရှိသည်ကိုမသိလျှင်၊ သင်သည်အောက်ပါ command ကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။
သင်၏ system သည် 32 သို့မဟုတ် 64 bits ဟုတ်မဟုတ်ကိုသင်သိရှိနိုင်ပြီးထိုအတူမည်သည့် package ကို download ဆွဲရမည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။
ဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့် application ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ system သို့ထည့်သွင်းရန်အောက်ပါ command ကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။
သို့ dmMediaConverter ကို Fedora, openSUSE, CentOS နှင့် derivatives များတွင် install လုပ်ပါrpm ဖိုင်ကို download လုပ်နိုင်ပါပြီ အောက်ပါ link ကို.
download လုပ်ပြီးတာနဲ့ terminal ပေါ်ကအောက်ပါ command ကိုလုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
တပ်ဆင်မှုအဆုံးမှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မီနူးမှလျှောက်လွှာကိုဖွင့ ်၍ ပျော်မွေ့နိုင်ရန်အတွက်သာရှာဖွေရမည်။
နောက်ဆုံးအမှု၏ Arch Linux နှင့်၎င်းမှဆင်းသက်လာသောအရာများသည် application သည် AUR repositories အတွင်းတွင်ရှိသည်, ဒါကြောင့်ငါတို့ system ပေါ်တွင် dmMediaConverter ကိုထည့်သွင်းရန် yaourt ကိုအသုံးပြုမည်။
Terminal ကိုဖွင့်ပြီးအောက်ပါ command ကိုလုပ်ဖို့လိုသည်။
ဤရေးသားသူ၏အဆိုအရလျှောက်လွှာကို Ubuntu repositories တွင်တိုက်ရိုက်တွေ့နိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်လက်ရှိဗားရှင်း ၁၄.၀၄ lts ကိုအသုံးပြုနေသောကြောင့်၎င်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်မထားရှိပါ။ လျှောက်လွှာ။
Linux မှ dmMediaConverter ကိုမည်သို့ဖယ်ထုတ်ရမည်နည်း။
အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့် အကယ်၍ သင်၏ system မှ dmmediaconverter ကို uninstall လုပ်လိုလျှင်၊ သင်၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းအမျိုးအစားအရသက်ဆိုင်ရာ command များကိုအသုံးပြုရမည်:
မသန်စွမ်း Debian, Ubuntu နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ:
အဘို့အနေစဉ် Fedora, openSUSE, CentOS နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ:
နောက်ဆုံးမှမှ uninstall လုပ်ရန် Arch Linux နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ:
dmMediaConverter နှင့်ဆင်တူသည့်အခြား application တစ်ခုခုကိုသင်သိရှိလျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်ဆိုပါကမှတ်ချက်များတွင်သူနှင့်မျှဝေရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » DmMediaConverter မာလ်တီမီဒီယာဖိုင်ပြောင်းစက် FFmpeg ကိုအခြေခံသည်
ကျူးဘားမှနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း ... ဤနေရာတွင် FFmpeg နှင့်အခြားအလားတူအထောက်အပံ့များအလွန်များပြားနေသည့်အတိုင်းအတာများပြားသောကြောင့်အရေအတွက်ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သိပ်မသိသောသုံးစွဲသူများအတွက်အထူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် FFmpeg အတွက် frontend ကဲ့သို့သောအခြေခံကိရိယာတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်သောအရာတစ်ခုခု ... သင်ကြည့်နိုင်သည် https://videomorph.webmisolutions.com/
မင်္ဂလာပါ၊ ဥပမာဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကို mp3 ဖိုင်သို့မည်သို့ပြောင်းမည်ဆိုသည်ကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုပို့နိူင်ပါသလား။
ဒီ option ကို VideoMorph တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် https://videomorph.webmisolutions.com/ ပရိုဂရမ်၏ရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုသည်အသံကိုထုတ်ယူပြီး MP3 format ဖြင့်သိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်ကြိမ်နှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။
Marius dalacu ဟုသူကပြောသည်
dmMediaConverter ကိုကြည့်ပါ။ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။
Marius Dalacu အားပြန်ကြားပါ
LibreOffice 6.1 သည်ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းပထမဆုံး alpha version ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်